यौन सम्पर्कपछि महिला र पुरुष दुवैले गर्नुपर्ने यी पाँच काम | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
यौन सम्पर्कपछि महिला र पुरुष दुवैले गर्नुपर्ने यी पाँच काम
access_time२०७६ साल कार्तिक ७ गते, बिहीबार ०१:४१ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ संसार जीवनशैली
एजेन्सी । शारीरिक सम्बन्ध हरेक वयश्क मानिसका लागि अनिवार्य र अतिआवश्यक हुन्छ । शारीरिक सम्बन्ध भएपछि के गर्ने ? भन्ने विषयमा धेरै प्रकारका चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । शारीरिक सम्बन्धपछि हुने क्रियाकलापले पनि यौन सन्तुष्टिमा असर गर्छ ।
शारीरिक सम्बन्ध भएपछि पिसाब फेर्नु स्वास्थ्यका लागि अति उत्तम मानिन्छ । यसले शरीरमा प्रवेश गर्न खोज्ने किटाणुलाई रोक्ने काम गर्छ । यौन सम्बन्धपछि पिसाब गर्दा युटीआइ जस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
योनी सफा गर्नुस्
शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेपछि योनी सफा गर्नुपर्छ । योनी सफा गर्न साबुन पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर साबुन पानी भित्र नपुग्नेगरी सफा गर्नु उत्तम हुन्छ ।
योनीमा प्राकृतिक लुब्रिकेशन हुन्छ । जसले योनीलाई नरम राख्न सहयोग पुग्छ । धेरैले गन्ध आएको भन्दै लुब्रिकेशनलाई हटाउने काम गर्छन् । त्यसो गर्नु राम्रो होइन् । साबुन पानीले योनी सफा गरेपछि मोइश्चर अन्त्य भएर नयाँ लुब्रिकेशनले काम गर्न थाल्छ ।
तत्काल कपडा नलगाउने
शारीरिक सम्बन्धपछि मानिसलाई थकान महसुस हुन्छ । सम्बन्धपछि नै मानिसले पहिल्यैका कपडा लगाएर सुत्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा शरीरमा पसिना आएर संक्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
बिना कपडा सुत्नु नै उत्तम मानिन्छ । कपडामा सुत्नु परेमा पनि अत्यन्तै लुज खालका कपडा लगाउनु पर्छ ।
शारीरिक सम्बन्धपछि शावर लिनु उत्तम मानिन्छ । धेरै तातो पानीको शावर भने कहिल्यै पनि लिनु हुँदैन । यौन सम्बन्धपछि महिलाको योनी हल्का खुल्छ । त्यस्तो अवस्थामा तातो पानीको टबमा बस्नु भनेको संक्रमणलाई निम्ता गर्नुहो ।
मनतातो पानीको सेवन
यौन सम्बन्धपछि शरीरमा पानीको मात्रामा कमि आउँछ । त्यसैले एक गिलाससम्म मनतातो पानी वा दुध सेवन गर्नु उत्तम मानिन्छ । दुध सेवन गरेर सत्दा पेटमा समस्या हुनसक्ने भएकाले मनतातो पानी सेवन गर्नुपर्नेमा चिकित्सकले जोड दिएका छन् ।
आज थपिएका १३१३ जना कोरोना संक्रमित कुन जिल्लाका कति ? (सूचीसहित)